६४७१ पटक हेरिएको
प्रकाशित: २०७५ भाद्र ०६ , २२:०४ बजे
एसएसपी बिक्रम चन्द ज्यू,
भोलि बिहान तपाईले जिम्मेवारी सम्हाल्ने वित्तिकै यी कुरा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
१– निर्मलाको योनीमा पाइएको बीर्य तत्काल विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको विश्वसनीय प्रमाण छ कि छैन ? कण्डम प्रयोग गरिएको हास्यास्पद तर्क नदिनु होला है !
२– विधि विज्ञान प्रयोगशालामा के के पठाइयो तत्काल ? हामीले यही सुरक्षित राखेका थियौं केही प्रमाण भन्ने लठैत जवाफको भर नपर्नुहोला ।
३– निर्मलाको शव पाइएको ठाउँबाट प्राप्त दसीप्रमाण के के हुन । हिजोअस्ती पाइएको भनिएको बाहेक, साउन ११ गतेको मुचुल्का नै आधार मान्नुहोला ।
४– बम दिदीबहिनीसँगको बयान अभिलिखित छ कि छैन ? उनीहरुलाई प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको फरेन्सिक प्रमाण हामीलाई चाहिन्छ ।
यी प्रश्नको उत्तर तपाईले कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको १२ घण्टाभित्र प्रेसमार्फत् दिन सक्नु भएन भने आन्दोलनले तपाईलाई पनि उडाउने छ । स्मरण रहोस, महेन्द्रनगरवासीले गरेका कुनै पनि आन्दोलन असफल भएका छैनन् ।
तपाईको अपरिचित मित्र खेम भण्डारीएसएसपी बिक्रम चन्द ज्यू,
५– एसपी विष्टलाई आन्दोलनकारीले गम्भीर आरोप लगाएको टेलिभिजन फुटेज पक्कै पनि तपाईले हेर्नु भएको होला । अनुसन्धानको दायरामा एसपी विष्ट तानिन्छन् कि तानिदैनन् ?
६–तपाई पनि महेन्द्रनगरवासी भन्ने थाहा पाएँ। तपाईको घर, परिवार, आफन्त, इष्टमित्र बस्ने ठाउँमा तपाई आफ्नो मात्रै होइन उहाँहरुको प्रतिष्ठाका लागि कति गम्भीर हुनुहुन्छ ?कि एसपी विष्ट झैं सोरा (You know this word) राठलाई समेत ध्यान दिनु हुन्न ? दिनुहुन्छ भने मलाई आशा छ । त्यसैले निर्मला हत्याकाण्डको सन्दर्भमा तपाईले आफ्ना भावी सन्ततीको इज्जतका लागि पनि इमान्दार काम गर्नुहुने छ भन्ने आशा छ ।
तपाईको अपरिचित मित्र